Shirkadda Apple oo soo saareysa taleefanno cusub oo casri - Halbeeg News
Shirkadda Apple oo soo saareysa taleefanno cusub oo casri
SILICON VALLEY (HALBEEG)- Shirkadda taleefanada iyo kumbiyuutarada ee Apple ayaa la filayaa in ay maanta ku dhawaaqdo in ay soo saareyso taleefano cusub oo ay kamid yihiin iPhone XS Max, iPad Pros iyo Macbookyo.
Xili sanadeedkii Apple ayaa isbuucan bilaabanaya , sanadkan abaalmarintiisu ayaa noqon karta mid aad u ballaaran.
Maanta oo Arbaco ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo dhowr nooc oo takeefanada iPhone ah oo uu ku jiro iPhone X-ka hadda la isticmaalo balse qaab ahaan iyo cabir ahaanba ka duwan kana wehn kaas oo loogu magac daray iPhone XS Max iyo mid ka yara raqiisanaan doono oo loogu magac daray iPhone XR.
Sadexdan taleefan ee cusub ayaa udub dhexaad u noqon doona taleefanada cusub ee ay soo bandhigeyso shirkadda Apple iyadoo sidoo kale la filayo in maanta lasoo bandhigo saacadda Apple nooceeda 4aad oo ka yara weyn tii hore.
Sidoo kale shirkadda Apple ayaa la filayaa in ay soo bandhigto iPad-yo cusub sidoo kale Mackbook-yo cusub iyo jaajarka aan fiilada laheyn ee sanad ka hor ku dhawaaqday shirkadda balse aanan suuqyada weli la keenin.
Shirkadda warbaahinta ee Bloomberg ayaa sheegtay in isniintii lasoo dhaafay la isla dhex marayay war sheegaya in taleefano casri ah ay soo saartay shirkadda Apple dhowaanna lagu dhawaaqi doono.
Sida uu sheegay Mack Gurman oo aad igu xeel dheer arrimaha taleefanada ayaa sheegay in taleefanada cusub uu kamid noqon iPhone XS iyo iPhone XS Max oo cabir ahaan noqon doona 6.5 inch kaas oo noqon doona taleefanka ugu weynaa ee iPhone ah oo intaa la eg.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida
Maamulka iyo dhalinyarada gobolka Hiiraan oo dib u habeyn ku sameynaya garoonka kubadda cagta Baladweyne